Basanta Basnet: बैसाखीविना उभिएका कवि
आजको बिजनेस सकियो।
शोक पर्ने दिन पानी बिर्बिराउँछ भन्छन् गाउँघरतिर। यस्सै त असारको दिन छ।
अफिसबाट निस्कने बेला सेलफोनमा लेखक कृष्ण धरावासीको नाम देखियो। उनको आवाज खस्नुअघि नै बोलेँ, 'सुनिसकेँ दाइ।'
धरावासीको आवाजमा असार भिजिरहेको थियो। गह्रौँ भइसकेको स्वर भर्खरै दिवंगत कविको करिश्माले थिचिएको थियो।
'डबली' ले केही लेख्नु परेन। किनकि यो पालि प्रधानसम्पादक आफैँ ओबिच्युअरी लेखिरहेका थिए।
म अफिसबाट निस्केर कतिखेर गाडीमा बसिसकेछु। त्यसले पछिल्लो सिटमा राखेर १२ वर्षअघिको समयतिर दौडाउँदै फर्कायो।
'काठमाडौँ प्रवृत्ति' सँग असहमत कृष्णभूषण सँगै बसिरहन सकेनन्। नभन्दै काठमाडौँसँग पारपाचुके गरे। मर्ने बेलासम्म विराटनगर बसे। उनी विराटनगर नै किन बसे? त्यो उनको कर्मथलो थियो ? कि कर्म दिने पिता देवी नेपाल बसेको सहर थियो?
Nagarik 30 June, 2012
Posted by Basanta Basnet at 6:23 AM